Horyaalka Ingiriiska Oo Furmay iyo Liverpool oo Guul Ku Bilowday • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Horyaalka Ingiriiska Oo Furmay iyo Liverpool oo Guul Ku Bilowday
Horyaalka Ingiriiska Oo Furmay iyo Liverpool oo Guul Ku Bilowday
August 10, 2019 - By: Abdirizak Shiino
Horyaalka ingiriiska ee Premiar League oo ah horyaalada loogu jecel yahay daawashooda caalamka ayaa xalay si rasmi ah u bilowday iyadoo ciyaartii kowaad ay isaga hor yimaadeen kooxda haysata horyaalnimada qaarada Yurub ee Liverbool iyo kooxda Norwich city oo sanadkan ku soo biirtay Horyaalka.
Horyaalka Ingiriirka oo 38 Ciyaarood la dheeli doono 9ka bilood ee soo socda, ayaa ciyaarta ugu horraysay waxay tijaabo u ahayd kooxda Liverbool oo baadigoobaysa inay mar uun qaado horyaalka Ingiriiska oo ayan qaadin muddo 30 sanno ah.
Kooxda Liverpool ayaa ciyaartan 4-1 Kaga badisay Kooxda Norwich city. Goolka kowaad oo dhashay daqiiqadii 7aad waxa isku dhaliyay ciyaaryahanka Grant Haylan oo difaaca uga ciyaarayay kooxda Norwich City.
Daqiiqadii 19aad ee qaybtii hore ee Ciyaarta ayaa Maxamed Saalax wuxuu shabaqa kooxda Norwich City la helay Goal qurux badan. Virgil Ban Dijk iyo Divock Origi ayaa daqiiqadii 28aad iyo 42aad ee qaybtii hore ciyaarta labo gool ka dhaliyay kooxda norwich City.
Goolka Kaliya ee kooxda Norwich city la timid ayaa dhashay daqiiqadii 64aad, waxaana shabaqa ku hubsaday Teemi Pukki.
Maanta oo sabti ah waxaa la ciyaarayaa lix ciyaarood, halka maalinta axadana la dheeli doono 3 Ciyaarood oo ah kuwa ugu waaweyn, uguna xiisaha badan horyaalka ingiriiska ee toddobaadkan, Ciyaarahaasi waxaa ka mid ah tan ay isaga hor imaanayana kooxaha Manchester United iyo Chelsea oo dhici doonta maalinta Axada.